Sawirro: Boqor iyo haweeney Carbeed oo duqeyn diyaaradeed la beegsanaya Daacish – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Boqor iyo haweeney Carbeed oo duqeyn diyaaradeed la beegsanaya Daacish
26th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Mareeg.com: Dhawaan Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa ku dhawaaqay guluf colaadeed oo ka dhan ah Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Suuriya.
Xulafada Mareykanka waxaa ka mid ah 5 dal oo Carab ah, kuwaasoo kala ah: Imaaraadka Carabta, Sacuudi Carabiya, Jordan, Baxreyn iyo Qatar.
Haddaba duqeymaha cirka ah ee xulafadaasi u geysteen Khalaafada Islaamiga ee Suuriya iyo Ciraaq waxaa ka qeyb galay haweeney duuliye oo uu dhalatay Imaarkaadka Carabta, taasoo lagu magacaabo Maryam Almansuuri.
Duuliye Maryam oo 35 jir ah ayaa wadda diyaarad nuuceedu yahay F16, waxeyna ka qeyb qaadatay duqeymo xulafadu u geysteen saldhigyo Khalaafadu ku leedahay dugaha Suuriya. Maryam ayaa lagu sheegay iney tahay gabadhii ugu horreysay ee kicisa diyaarad dagaal dalka Imaaradka Carabta.
Sidoo kale, waxaa duulaanka cirka ka qeyb qaadanaya duuliye ka tirsan qoyska reer boqor ee dalka Sacuudi Carabiya, kaasoo uu dhalay dhaxalsugaha Boqortooyda.
Boqor Khalid Bin Salman ayaa duuliya diyaarad dagaal oo nuuceedu yahay Tornado, wuxuuna sidoo kale wax ka weeraray xarrumaha Khalaafadu ku leedahay Suuriya.
Dalalka Khaliijka ayaa la sheegay iney ka anfariireen kor u kaca Khalaafada Islaamka ee ka talisa gobollo badan oo ka tirsan Ciraaq iyo Suuriya, waxeyna fooda ka galeen xulafada Mareykanku sameeyey ee dagaalka kula jira kooxdaas.
Xukuumada Soomaaliya oo ansixisay heshiiska Xuquuqda Caruurta ee Qaramada Midoobay